Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ)
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
KALEORID LP က ို
ကြွက်သားများ ဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်ခြင်း တို့ကိုကုသရန် အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
KALEORID LP ကို ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
KALEORID LP ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ KALEORID LP ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ KALEORID LP
ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
KALEORID LP ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
KALEORID LP ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
KALEORID LP ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
KALEORID LP သည်သွေးထဲတွင် ပိုတက်ဆီယံဓါတ်ကို လွန်စွာ မြင့်တက်စေနိုင်သောကြောင့် ဆေးသောက်နေချိန်တွင် သွေးထဲရှိ ပိုတက်ဆီယံဓါတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ လိုအပ်လျှင် နှလုံး ECG ဆွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။
ထို့ ပြင် KALEORID LP ကို
ဟော်မုန်းဓါတ်နှင့် ပတ်သက်သောရောဂါများ(ဆေးမနိုင်သော ဆိးချိုရောဂါ၊ Addison ရောဂါ)ကို ကုသရာတွင် မသုံးရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
KALEORID LP ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ
သွေးထဲတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်များ မမျှတခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
KALEORID LP ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ (ဥပမာ သင်သည်
ACE inhibitors သွေးတိုးကျဆေးများ၊နှလုံးဆေးများသောက်နေလျှင်)
ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
KALEORID LP က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
KALEORID LP ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မွေးရာပါ ကြွက်သာများ တောင့်တင်းသောရောဂါရှိခြင်း တို့ရှိလျှင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆေးပမာဏသည် ပိုတက်ဆီယံဓါတ်နည်းရခြင်းအကြောင်းများအပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားမှုရှိသည်။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ပမာဏထက်ပို မသောက်ပါနှင့်။
ကလေးတွေအတွက် Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Kaleorid Lp (ကလီယိုရဒ် အဲလ်ပီ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Bradosol ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၆၀၀မီလီဂရမ် KALEORID LP ဆေးပြား
KALEORID LP ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။